Arabia Saodita : Ny tondra-dranon’i Jeddah an-tsary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Janoary 2010 7:11 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Nederlands, Deutsch, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Português, English
Mbola miresaka momba ilay tondra-dranon'i Jeddah sy ny vokany foana ny olona, telo herinandro taorian'ny ora-mikija sy ny tondra-drano nampihantona ny fiainana tany andrefan'i Arabia Saodita. Mizara rohy ao amin'ny YouTube ireo mpampiasa aterineto, mampiseho ny fahavoazana goavana, avy amin'ny mailaka.
Bobo6699tariq mizara ity video ity, mampiseho ireo fiara voafaoka eny amin'ny làlana lasa toy ny renirano:
Ny tondra-dranon'i Jeddah sy ny loza-voajanahary..
Ary dia miseho amin'ny tena endriny ny ao amin'ny Fivondronana [municipality]. Any akaikin'ny Zaflata sy Quwaiz, nanangana trano teny amin'ny lohasaha izy ireo ary dia difotry ny rano ireny trano ireny, maty ny olona nefa tsy nanampy azy ireo akory ny tomponandraikitra amin'ny fiarovana sivily. Hanampy azy ireo anie Andriamanitra ary hampionona azy ireo amin'ny namoizan'izy ireo trano, fiara ary aina.
MsAbuRayan mampiseho tranga hafa momba ilay tondra-drano:
Tondraka ny rano manerana ny araben'i Jack ary tena nahatsiravina. Difotry ny rano ny rihana voalohan'ireo trano fivarotana. Hamaly soa ireo namoy ny tranony , ny fivarotana ary ny fiarany anie Andriamanitra ary hamindra fo amin'ireo maty anie Izy.
Maher, ao amin'ny Maherex, naka ity video ity, mampiseho fahasimbana hafa:
Namoaka ity video ity koa izy, izay mampiseho fiara marobe simba: